လူစာရင်းလိမ်ခံရသဖြင့် မွတ်စလင်မ်များဒုက္ခသည်စခန်း ရိက္ခာပြတ်တော့မည် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
လူစာရင်းလိမ်ခံရသဖြင့် မွတ်စလင်မ်များဒုက္ခသည်စခန်း ရိက္ခာပြတ်တော့မည်
Yaw Min Gyi shared Myanmarmuslim Net‘s photo.
လူစာရင်းလိမ်ခံရသဖြင့် မွတ်စလင်မ်များဒုက္ခသည်စခန်း ရိက္ခာပြတ်တော့မည်..
ရခိုင်ဒေသရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဒါးပိုင်စခန်းရှိ ဒုက္ခသည်ဦးရေကို တာဝန်ရှိသူများက WFR ထံ စာရင်းလိမ် လျှော့ပေါ့ တင်သွင်း ခဲ့သဖြင့် ယခုအခါ ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါစခန်းတွင် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။
”ဒုက္ခသည်တွေ ဆန္ဒပြမှာစိုးလို့ ၁၀ ရက်စာရိက္ခာကို မချန်တော့ဘဲပေးမှာ၊ လူစာရင်းအများကြီးလျှော့ နေတဲ့အတွက်(၄)ရက်နဲ့ကုန်မှာ၊ (၅)ရက်မြောက်နေ့ကစပြီး ရိက္ခာမရှိတော့ဘူး” ဟု ဒါးပိုင်စခန်းမှ ….
ဒါးပိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဒုက္ခသည် ၁၂၆၇၅ ဦး ရှိသော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က WFP ထံ အဆိုပါစခန်း၌ လူဦးရေ ၅၀၀၀ သာရှိကြောင်း စာရင်းလိမ်တင် သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ မွတ်စလင်မ်ဒုက္ခသည်စာရင်းလျော့ပြမှုကြောင့် မွတ်စလင်မ် ဒုက္ခသည် တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော်ရှိ သည့်အနက် ဒုက္ခသည် ၅၁၅၀ ခန့်အတွက်သာ WFP က ရိက္ခာဝေစုထုတ် ပေးကြောင်း သိရသည်။
”လူဦးရေစာရင်း အရမ်းကွာနေကြောင်း ၁၂ ရက်နေ့ကတည်းက စာတင်ထားတယ်၊ စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်အောင်နဲ့ စခန်းမှာ နေရာချထားရေးတာဝန်ရှိသူလို့ဆိုတဲ့ ဦးကျော်ဇောလှ တို့ဆီ စာတင်ထားတယ်”။ အခု အထိတော့ တစ်ခုမှ အဖြေထွက် မလာသေးဘူး”ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ယခုအခါ WFP က ၁၀ရက်စာ ရိက္ခာကြိုတင်ထုတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့ရောက်မှ အသစ်ထပ်မံ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုကဲ့သို့ လူစာရင်းကွာဟမှုကြောင့် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့ကစပြီး ရိက္ခာပြတ်လပ် တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုက္ခသည် တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
The Voice ဂျာနယ်နဲ့ ဗိုဟ်ချုပ်ဂွမ်မော် အင်တာဗျူး →